Yabelana njani ngewatchface yeApple Watch yethu | Ndisuka mac
Ungahlulelana njani ngewatchface kwiApple Watch yethu
Olu lolunye lolo khetho olunokuthi lungabonakali ngabasebenzisi beApple Watch kwaye nabani na onale wotshi banako yabelana ngomboniso / ubuso naye nawuphi na umsebenzisi Ngendlela elula nekhawulezayo.
Kulula njengokulandela la manyathelo esiza kukubonisa apha ngezantsi, ungakhathazeki, uya kudlula kuphela kwinqanaba ofuna ukulaba ngalo, kunye neengxaki kwindawo apho uzibeke khona Kwaye ukuba umsebenzisi odlulisa kuye indawo akanazo ii -apps ozifakileyo kule ndawo, iApple Watch iya kubonelela ngokuzikhuphela ngqo.
Yabelana ngendawo kunye nabani na ofuna ngokukhawuleza nangokulula
Singatsho ukuba lo msebenzi ufike kwi-watchOS 7 unokuba luncedo kakhulu kwabo bantu bangakhethi zigqibo okanye abo babona ukucofa kwiwotshi yakho kwaye bayayithanda, kunjalo indlela elula ngokwenene nekhawulezayo yokwabelana ngamacandelo ngaphandle kwesidingo sokuba omnye umsebenzisi enze i-sphere ngesandla.
Ngale nto, into yokuqala ekufuneka siyenzile yile shiya ucinezelwe kwibala esifuna ukwabelana ngalo kwaye ucofe kwisikwere kunye notolo olubonakalayo (share) kwikona esezantsi ekhohlo yewotshi yethu. Kamva sidibanisa umfowunelwa kubani esifuna ukwaba inqanaba kwaye silithumela kubo, kulula oko. Ngokuqinisekileyo unendlela elula yokudlula kwidayala kwaye omnye umntu one-Apple Watch akanasidingo sokuyilungiselela ngesandla kwiwotshi yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ungahlulelana njani ngewatchface kwiApple Watch yethu
Umsebenzisi wenza uhlobo "lwekhadi" i-AirTag ukuze igcinwe kwisipaji